ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » စကားတာ » Hangman
အဆိုပါပျော်မွေ့ hangman ဂိမ်း သင့်ရဲ့မိုဘိုင်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ပေါ်မှာ! ဤသည် Gallow ဂန္ထဝင်ဂိမ်းသည်အထူးသဖြင့်သူတို့၏ဘာသာစကားစွမ်းရည်နှင့်ဝေါဟာရသို့မဟုတ်ကလေးငယ်များအတွက်စကားလုံးအသစ်များကိုသင်ယူလိုသောအရွယ်ရောက်သူများအတွက်သင့်လျော်သည်။ သင့်စက်အတွက်ဂန္တ ၀ င်လက်ကိုင်ဖုန်း
Hangman သည်2player mode နှင့်ပါ ၀ င်ပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင်စကားလုံးများကိုရေး။ သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုဝင်များနှင့်ကစားနိုင်သည်။ စကားလုံးတစ်လုံးကိုရွေးချယ်ပြီးအကန့်အသတ်မဲ့စကားလုံးများဖြင့်ဂိမ်းကစားပါ။ အရိပ်အမြွက်များကို အသုံးပြု၍ သူတို့ခန့်မှန်းရလိမ့်မည်။ တကယ်ပျော်စရာ mode!
"hanged" ဟုလည်းလူသိများသော The hangman သည်ဂန္ထဝင်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်သင်ထည့်သွင်းနိုင်သည့်စာလုံးများကို ရွေးချယ်၍ စကားလုံးတစ်လုံးကိုခန့်မှန်းရမည်ဖြစ်သည်။
Hangman ဂိမ်းသည်မည်သည့်စကားလုံးကိုဝှက်ထားနေသည်ကိုခန့်မှန်းရန်သရအက္ခရာနှင့်ဗျည်းအက္ခရာများကိုရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးလိမ့်မည်။ သင်ပြုမိသောအမှားတစ်ခုစီအတွက်လူတစ် ဦး ၏ပုံသဏ္willာန်ကိုဖော်ထုတ်လိမ့်မည်။ ပထမ ဦး ဆုံးလည်ဆွဲချတိုင်၊ နောက် ဦး ခေါင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်လက်မောင်းနှင့်ခြေထောက်များဖြစ်သည်။ အဆိုပါလည်ဆွဲချတိုင်မပြည့်မှီစကားလုံးမှန်းဆ။
အကယ်၍ သင်ကလူ၏ပုံမပြီးဆုံးမီမှန်ကန်သောစကားလုံးကိုသင်ရေးနိုင်လျှင်သင်သည် Hangman ဂိမ်းကိုအနိုင်ရရှိလိမ့်မည်။ မရရှိလျှင်၎င်းကိုကြိုးဆွဲချပြီးအပြီးသတ်လိမ့်မည်။
အရိပ်အမြွက် - လျှို့ဝှက်စာတစ်စောင် (a, e, i, o, u …စသည်ဖြင့်) ခန့်မှန်းရန်အခွင့်အရေးများစွာရှိသောကြောင့်သရအက္ခရာများကို ဦး စွာအသုံးပြုပါ။
- အသက်အရွယ်အားလုံးအတွက်။ လူကြီးများနှင့်အကြီးတန်းကစားသမားများအတွက်အကောင်းဆုံးစံပြပုဂ္ဂိုလ်
- Total အခမဲ့
- 2-player mode ဖြင့်မိတ်ဆွေများ၊ မိသားစုများနှင့်ကစားပါ
- သင်၏ရမှတ်ကိုကမ္ဘာတဝှမ်းရှိသူငယ်ချင်းများ၊ ကစားသမားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ
စပိန် ahorcado, အင်္ဂလိပ် hangman, ပေါ်တူဂီ jogo da forca, ပြင်သစ် le pendu, အီတလီ l'impiccato နှင့်အခြားများစွာတို့အတွက်အဆိုပါ hangman ကိုဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
Tellmewow သည်အလွယ်တကူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နှင့်အခြေခံအသုံးဝင်မှုရှိစေရန်အထူးပြုထားသောမိုဘိုင်းဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သက်ကြီးရွယ်အိုများသို့မဟုတ်အဓိကရှုပ်ထွေးမှုများမရှိဘဲပုံမှန်အားဖြင့်ဂိမ်းကစားချင်သောလူငယ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Hang Hangman ကစားခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
English အင်္ဂလိပ်၊ စပိန်၊ ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ ပေါ်တူဂီ၊
children ကလေးများ၊ လူကြီးများနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများအားလုံးအတွက်အသက်အရွယ်အားလုံးအတွက်သင့်တော်သည်။
⭐️ 2-player mode နှင့်ခေါင်းဆောင်ဘုတ်
ဂိမ်းတွင်အမှားအယွင်းများရှိပါက hola@tellmewow.com သို့ကျွန်ုပ်တို့ထံစာရေးဆက်သွယ်နိုင်သည်
26.34 ကို MB